အေဘရာဟမ် အမှတ်ပြည့် နီးပါး ရခဲ့တဲ့ ဝုလ်ဗ် နဲ့ ဂိုးပြတ် နိုင်ပွဲ က ချယ်လ်ဆီး အသင်းသား တွေရဲ့ ခြေစွမ်း ကို အကဲဖြတ်ကြည့်ခြင်း ( Players’ Ratings ) - SPORTS MYANMAR
အေဘရာဟမ် အမှတ်ပြည့် နီးပါး ရခဲ့တဲ့ ဝုလ်ဗ် နဲ့ ဂိုးပြတ် နိုင်ပွဲ က ချယ်လ်ဆီး အသင်းသား တွေရဲ့ ခြေစွမ်း ကို အကဲဖြတ်ကြည့်ခြင်း ( Players’ Ratings )
ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာ မနေ့ည က ကစား သွားခဲ့တဲ့ ဝုလ်ဗ် အသင်း နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် မှာ လူငယ် တိုက်စစ်မှူး တမ်မီ အေဘရာဟမ် ရဲ့ ဟက်ထရစ် သွင်းဂိုး နဲ့ အတူ ၂ – ၅ ဆိုတဲ့ ရလဒ် နဲ့ ဂိုးမိုးရွာ ခဲ့ကာ အားလုံး မထင်မှတ် ထားတဲ့ ရလဒ် နဲ့ အတူ အနိုင် ၃ မှတ် ရယူ ပြနိုင် ခဲ့ပါတယ် ။ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာ ထို ပွဲစဉ် မတိုင်မီ အဓိက ကစားသမား တချို့ ဒဏ်ရာကြောင့် လွဲချော် ထားလို့ နည်းပြ ဖရန့် လမ်းပတ် ဟာ ကစားကွက် အပြောင်းအလဲ နဲ့ နေရာ အပြောင်းအလဲ တချို့ ပြုလုပ် ထားခဲ့ပါတယ် ။
၄ – ၃ – ၃ ကနေ ၃ – ၄ – ၃ ကစားကွက် ကို ပြောင်းလဲ ခဲ့သလို wing – back အားသန် တဲ့ အလွန်ဆို ကို ပွဲထုတ်ပြီး ဒဏ်ရာ ကနေ ပြန်ကောင်း လာတဲ့ ရူဒီဂါ ကိုလည်း ဒီရာသီ ပထမဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲကို ကစား စေခဲ့ပါတယ် ။ တကယ်တမ်း နိုင်ပွဲ အတွက် သွင်းဂိုး တွေကို ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ အကယ်ဒမီ ထုတ်ကုန် ကစားသမား ၃ဦး ဖြစ်တဲ့ အေဘရာဟမ် ၊ မေဆင်မောင့် ၊ တိုမိုရီ တို့ဆီကနေ ရရှိ ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ထို ပွဲစဉ် အပြီး ချယ်လ်ဆီး ကစားသမား တွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ဘယ်လို ရှိမလဲ ကြည့်ရအောင်ပါ ။
ဂိုးသမား – ကီပါ ( Rating –5)
အခု အချိန် အထိ ၅ပွဲ ကစား ၊ တပွဲမှာ Clean Sheet ပွဲစဉ် မရှိခဲ့ပေမယ့် ဂိုးပေး ရတာ ကီပါ ရဲ့ အမှား တွေကြောင့် လို့ မဆိုသာပါဘူး ။ နောက်တန်း က တည်ငြိမ်မှု တချို့ လိုအပ် နေဆဲ ဖြစ်ပေမယ့် မနေ့ည က ပွဲရဲ့ ဝုလ်ဗ် ရဲ့ ပထမ ချေပဂိုး က ကီပါ ရဲ့ မသေသပ်တဲ့ ရှင်းထုတ်မှု ကြောင့် လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ခံစစ်မှူး – ရူဒီဂါ ၊ ခရစ်တန်ဆန် ( Rating –7) ၊ တိုမိုရီ ( Rating – 8 )
ဒဏ်ရာ က ပြန်ကောင်း လာပြီး ချယ်လ်ဆီး အတွက် ပထမဆုံး ကစား ပေးနိုင် ခဲ့တဲ့ ရူဒီဂါ ရဲ့ သက်ရောက်မှု က ဘယ်လောက် ထိ အရေးပါ ခဲ့လဲ ဆိုတာ မနေ့က ပွဲက သက်သေ ပြနေမှာပါ ။ ရူဒီဂါ ရှိနေတဲ့ အတွက် အက်ဇ်ပီလီကွီတာ အရှေ့ကို အေးအေးဆေးဆေး တိုက်စစ်ဆင် နိုင်တာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ် ။ အလားတူပဲ ခရစ်တန်ဆန် ဟာလည်း နောက်တန်း ၃ ယောက် ထဲမှာ အလယ် ဗဟိုမှာ ကစား ခဲ့ရတယ် ဆိုပေမယ့် တည်ငြိမ် တဲ့ ရှင်းထုတ်မှု တွေကို ပြုလုပ် ပေးနိုင်ဆဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
မနေ့ည က ပွဲရဲ့ နောက်တန်း မှာ မထင်မှတ် ထားလောက်အောင် တည်ငြိမ် လွန်းတဲ့ တိုမိုရီ ဟာ အနာဂတ် ချယ်လ်ဆီး ရဲ့ ဝီလီယံ ဂါးလက်စ် ( သို့မဟုတ် ) ဒက်ဆယ်လီ လို့တောင် တင်စား လို့ ရတဲ့ အနေအထား မှာ ရှိနေပါပြီ ။ တိုက်စစ် လိုက်ပါ ရာမှာလည်း အရမ်း ကောင်းခဲ့သလို ၊ ခံစစ်ပိုင်း မှာလည်း မာမာထန်ထန် နဲ့ အမှားနည်း ခဲ့ပါတယ် ။ အဝေး ကန်ချက် နဲ့ သွင်းဂိုး တဂိုး ကတော့ တိုမိုရီ ကို အမှတ်တရ ဖြစ်စေမှာပါ ။
wing-backs – မားကို့စ် အလွန်ဆို ၊ အက်ဇ်ပီလီကွီတာ ( Rating –7)
ဒီရာသီ ချယ်လ်ဆီး အသင်း အတွက် ပထမဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲထွက်ခွင့် ကို ရရှိ ခဲ့သလို သူ အားသန် တဲ့ နေရာ ဖြစ်တဲ့ wing-back မှာ ကစားခွင့် ရခဲ့တာကြောင့် အလွန်ဆို ဟာ ချယ်လ်ဆီး တိုက်စစ် မှာ ဆေးတလက် အဖြစ် ရပ်တည် ခဲ့ပါတယ် ။ အတက်အဆင်း မှန်မှန် ပြုလုပ် နိုင်ခဲ့သလို အေဘရာဟမ် ရဲ့ ဒုတိယဂိုး အတွက် တည်ငြိမ်တဲ့ ဖန်တီးမှု ကို ပြုလုပ် ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
ညာဖက်ခြမ်း wing-back မှာတော့ အရှေ့ ပွဲတွေမှာ တောက်လျှောက် ခြေစွမ်း ညံ့ဖျင်း ခဲ့လို့ ဝေဖန်ခံ နေရတဲ့ အက်ဇ်ပီလီကွီတာ ကိုပဲ လမ်းပတ် ဟာ ယုံယုံကြည်ကြည် နဲ့ ဆက်လက် အသုံးပြု ခဲ့ပါတယ် ။ လိုအပ်ချက် တချို့ ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပေမယ့် ဒီနေ့ ပွဲမှာ အက်ဇ်ပီ ရဲ့ ကစားပုံ တည်ငြိမ် ခဲ့တယ် လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပြီး ရူဒီဂါ ကြောင့်လည်း စွမ်းဆောင်ရည် အား ပိုတက် ခဲ့ရပါတယ် ။
Wolverhampton Wanderers’ Spanish striker Adama Traore (L) vies with Chelsea’s Spanish defender Marcos Alonso (R) during the English Premier League football match between Wolverhampton Wanderers and Chelsea at the Molineux stadium in Wolverhampton, central England on September 14, 2019. (Photo by GEOFF CADDICK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or ‘live’ services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
ကွင်းလယ် – ဂျော်ဂျင်ဟို ၊ ကိုဗာဆစ် ( Rating – 8 )
ချယ်လ်ဆီး အတွက် ပထမဆုံး ဂိုးဖန်တီးမှု ပြုလုပ် နိုင်ခဲ့တဲ့ ဂျော်ဂျင်ဟို ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ကတော့ တပွဲ ထက် တပွဲ ချယ်လ်ဆီး ပရိသတ် တွေကို ပိုပိုပြီး အားရ စေမှာ အသေအချာ ပါပဲ ။ မနေ့က ပွဲမှာလည်း ဂျော်ဂျင်ဟို ဟာ မှားယွင်းတဲ့ ပေးပို့မှု တချို့ ပြုလုပ် ခဲ့ရင်တောင် သူဟာ ချယ်လ်ဆီး ကွင်းလယ် ရဲ့ လိုအပ်သမျှ ပေးပို့မှု တွေကို ပြုလုပ် ပေးနိုင်တဲ့ မရှိမဖြစ် ကစားသမား တယောက် အဖြစ် ရပ်တည် နေဆဲ ဆိုတာ ဆက်လက် ပြသ နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
သွင်းဂိုး တဂိုး မှ မရသေးဘူး ဆိုပေမယ့် ကိုဗာဆစ် ဟာ ချယ်လ်ဆီး ကွင်းလယ် တိုက်စစ် နဲ့ ခံစစ် ကို ဟန်ချက် ညီအောင် ထိန်းပေး နိုင်တဲ့ Box-to-Box ကစားသမား ကောင်း တယောက် အနေနဲ့ အသင်း ရဲ့ ကွင်းလယ် ကို ဦးဆောင်မှု ပြုပေး နေပါတယ် ။ လမ်းပတ် ရဲ့ လက်အောက် မှာ ခြေစွမ်း အများကြီး တိုးတက် လာတဲ့ နောက်ထပ် ကွင်းလယ်လူ တဦး လို့ သတ်မှတ်မယ် ဆိုရင်လည်း မမှားနိုင်ပါဘူး ။
တိုက်စစ် – ဝီလီယံ ( Rating –6) ၊ မေဆင်မောင့် ( Rating –7) ၊ အေဘရာဟမ် ( Rating –9)
ဒီရာသီ ပထမဆုံး ချယ်လ်ဆီး အသင်း အတွက် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲထွက်ခွင့် ရရှိ ခဲ့တဲ့ ဝီလီယံ ဟာ မနေ့ည က ပွဲရဲ့ တချို့ ပွဲချိန် တွေမှာ မလိုအပ်တဲ့ ဘောလုံး ကိုင်မှု တွေကို ဆက်လက် ပြုလုပ် နေဆဲ ဖြစ်ပြီး တချက် တချက် ခံစစ် ကို ဘောလုံး ပြန်ပြန် ဆွဲသွားတာ က ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ် ကို နှောင့်နှေး စေခဲ့တာ ကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ် ။ သို့ပေမယ့် လည်း လျင်မြန်တဲ့ တိုက်စစ် စွမ်းဆောင်ရည် နဲ့ ဖြတ်တင်ဘော တချို့ ကို ဝီလီယံ ဆီကနေ ရရှိ ခဲ့ပါတယ် ။
မနေ့ည က ပွဲမှာ သွင်းဂိုး ၂ဂိုး လောက် ရခဲ့သင့်တဲ့ မောင့် ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ကတော့ ချယ်လ်ဆီး ပရိသတ် တွေကို ဖျော်ဖြေမှု ပေးနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ လမ်းပတ် လက်သစ် လို့ သတ်မှတ် လို့ မရသေးဘူး ဆိုရင်တောင် မောင့် ဟာ ဒီရာသီ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမား တဦး လို့ သတ်မှတ် လို့ ရနေတဲ့ အနေအထား မှာ ရှိနေပါပြီ ။ အလိမ်အခေါက် စွမ်းရည်ကောင်း ၊ တဦးချင်း ကျော်ဖြတ်မှု တချို့ ၊ အမိုက်စား ဖြတ်တင်ဘော တွေကို မေဆင်မောင့် စွမ်းဆောင် ထားခဲ့ပါတယ် ။
ချယ်လ်ဆီး အတွက် ပထမဆုံး ဟက်ထရစ် ဂိုး ရခဲ့တဲ့ အေဘရာဟမ် ကတော့ မနေ့ည က ပွဲစဉ် ရဲ့ Man of the Match ပါပဲ ။ တိုက်စစ်ပိုင်း နေရာယူမှု ၊ အတိုးအလှုပ် ၊ တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် ကစားနိုင်မှု ၊ အဆုံးသတ်ပိုင်း တွေက ဘာမှ ပြောစရာ မရှိအောင် အထူး ကောင်းနေခဲ့ပါတယ် ။ ဒါဟာ လမ်းပတ် ရဲ့ ယုံကြည်မှု တွေကို အေဘရာဟမ် ဟာ သူ တတ်စွမ်းသလောက် သွင်းဂိုး တွေနဲ့ ပြန်ပြီး ပေးဆပ် နေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
လူစားဝင် ကစားသမား တွေရဲ့ Rating များ – ဇူးမား ( Rating –6) ၊ ဘာကလေ ( Rating –5) ၊ ဘတ်ရှူဝါရီ ( Rating –5)
အဘေရာဟမျ အမှတျပွညျ့ နီးပါး ရခဲ့တဲ့ ဝုလျဗျ နဲ့ ဂိုးပွတျ နိုငျပှဲ က ခယျြလျဆီး အသငျးသား တှရေဲ့ ခွစှေမျး ကို အကဲဖွတျကွညျ့ခွငျး ( Players’ Ratings )
ခယျြလျဆီး အသငျး ဟာ မနညေ့ က ကစား သှားခဲ့တဲ့ ဝုလျဗျ အသငျး နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျ မှာ လူငယျ တိုကျစဈမှူး တမျမီ အဘေရာဟမျ ရဲ့ ဟကျထရဈ သှငျးဂိုး နဲ့ အတူ ၂ – ၅ ဆိုတဲ့ ရလဒျ နဲ့ ဂိုးမိုးရှာ ခဲ့ကာ အားလုံး မထငျမှတျ ထားတဲ့ ရလဒျ နဲ့ အတူ အနိုငျ ၃ မှတျ ရယူ ပွနိုငျ ခဲ့ပါတယျ ။ ခယျြလျဆီး အသငျး ဟာ ထို ပှဲစဉျ မတိုငျမီ အဓိက ကစားသမား တခြို့ ဒဏျရာကွောငျ့ လှဲခြျော ထားလို့ နညျးပွ ဖရနျ့ လမျးပတျ ဟာ ကစားကှကျ အပွောငျးအလဲ နဲ့ နရော အပွောငျးအလဲ တခြို့ ပွုလုပျ ထားခဲ့ပါတယျ ။
၄ – ၃ – ၃ ကနေ ၃ – ၄ – ၃ ကစားကှကျ ကို ပွောငျးလဲ ခဲ့သလို wing – back အားသနျ တဲ့ အလှနျဆို ကို ပှဲထုတျပွီး ဒဏျရာ ကနေ ပွနျကောငျး လာတဲ့ ရူဒီဂါ ကိုလညျး ဒီရာသီ ပထမဆုံး ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲကို ကစား စခေဲ့ပါတယျ ။ တကယျတမျး နိုငျပှဲ အတှကျ သှငျးဂိုး တှကေို ခယျြလျဆီး အသငျး ရဲ့ အကယျဒမီ ထုတျကုနျ ကစားသမား ၃ဦး ဖွဈတဲ့ အဘေရာဟမျ ၊ မဆေငျမောငျ့ ၊ တိုမိုရီ တို့ဆီကနေ ရရှိ ခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။ ထို ပှဲစဉျ အပွီး ခယျြလျဆီး ကစားသမား တှရေဲ့ စှမျးဆောငျရညျ ဘယျလို ရှိမလဲ ကွညျ့ရအောငျပါ ။
အခု အခြိနျ အထိ ၅ပှဲ ကစား ၊ တပှဲမှာ Clean Sheet ပှဲစဉျ မရှိခဲ့ပမေယျ့ ဂိုးပေး ရတာ ကီပါ ရဲ့ အမှား တှကွေောငျ့ လို့ မဆိုသာပါဘူး ။ နောကျတနျး က တညျငွိမျမှု တခြို့ လိုအပျ နဆေဲ ဖွဈပမေယျ့ မနညေ့ က ပှဲရဲ့ ဝုလျဗျ ရဲ့ ပထမ ခပြေဂိုး က ကီပါ ရဲ့ မသသေပျတဲ့ ရှငျးထုတျမှု ကွောငျ့ လို့ ဆိုရမှာ ဖွဈပါတယျ ။
ခံစဈမှူး – ရူဒီဂါ ၊ ခရဈတနျဆနျ ( Rating –7) ၊ တိုမိုရီ ( Rating – 8 )
ဒဏျရာ က ပွနျကောငျး လာပွီး ခယျြလျဆီး အတှကျ ပထမဆုံး ကစား ပေးနိုငျ ခဲ့တဲ့ ရူဒီဂါ ရဲ့ သကျရောကျမှု က ဘယျလောကျ ထိ အရေးပါ ခဲ့လဲ ဆိုတာ မနကေ့ ပှဲက သကျသေ ပွနမှောပါ ။ ရူဒီဂါ ရှိနတေဲ့ အတှကျ အကျဇျပီလီကှီတာ အရှကေို့ အေးအေးဆေးဆေး တိုကျစဈဆငျ နိုငျတာကို တှခေဲ့ရပါတယျ ။ အလားတူပဲ ခရဈတနျဆနျ ဟာလညျး နောကျတနျး ၃ ယောကျ ထဲမှာ အလယျ ဗဟိုမှာ ကစား ခဲ့ရတယျ ဆိုပမေယျ့ တညျငွိမျ တဲ့ ရှငျးထုတျမှု တှကေို ပွုလုပျ ပေးနိုငျဆဲ ဖွဈပါတယျ ။
မနညေ့ က ပှဲရဲ့ နောကျတနျး မှာ မထငျမှတျ ထားလောကျအောငျ တညျငွိမျ လှနျးတဲ့ တိုမိုရီ ဟာ အနာဂတျ ခယျြလျဆီး ရဲ့ ဝီလီယံ ဂါးလကျဈ ( သို့မဟုတျ ) ဒကျဆယျလီ လို့တောငျ တငျစား လို့ ရတဲ့ အနအေထား မှာ ရှိနပေါပွီ ။ တိုကျစဈ လိုကျပါ ရာမှာလညျး အရမျး ကောငျးခဲ့သလို ၊ ခံစဈပိုငျး မှာလညျး မာမာထနျထနျ နဲ့ အမှားနညျး ခဲ့ပါတယျ ။ အဝေး ကနျခကျြ နဲ့ သှငျးဂိုး တဂိုး ကတော့ တိုမိုရီ ကို အမှတျတရ ဖွဈစမှောပါ ။
wing-backs – မားကို့ဈ အလှနျဆို ၊ အကျဇျပီလီကှီတာ ( Rating –7)
ဒီရာသီ ခယျြလျဆီး အသငျး အတှကျ ပထမဆုံး ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲထှကျခှငျ့ ကို ရရှိ ခဲ့သလို သူ အားသနျ တဲ့ နရော ဖွဈတဲ့ wing-back မှာ ကစားခှငျ့ ရခဲ့တာကွောငျ့ အလှနျဆို ဟာ ခယျြလျဆီး တိုကျစဈ မှာ ဆေးတလကျ အဖွဈ ရပျတညျ ခဲ့ပါတယျ ။ အတကျအဆငျး မှနျမှနျ ပွုလုပျ နိုငျခဲ့သလို အဘေရာဟမျ ရဲ့ ဒုတိယဂိုး အတှကျ တညျငွိမျတဲ့ ဖနျတီးမှု ကို ပွုလုပျ ပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ ။
ညာဖကျခွမျး wing-back မှာတော့ အရှေ့ ပှဲတှမှော တောကျလြှောကျ ခွစှေမျး ညံ့ဖငျြး ခဲ့လို့ ဝဖေနျခံ နရေတဲ့ အကျဇျပီလီကှီတာ ကိုပဲ လမျးပတျ ဟာ ယုံယုံကွညျကွညျ နဲ့ ဆကျလကျ အသုံးပွု ခဲ့ပါတယျ ။ လိုအပျခကျြ တခြို့ ရှိနဆေဲ ဖွဈပမေယျ့ ဒီနေ့ ပှဲမှာ အကျဇျပီ ရဲ့ ကစားပုံ တညျငွိမျ ခဲ့တယျ လို့ ဆိုရမှာ ဖွဈပွီး ရူဒီဂါ ကွောငျ့လညျး စှမျးဆောငျရညျ အား ပိုတကျ ခဲ့ရပါတယျ ။
ကှငျးလယျ – ဂြျောဂငျြဟို ၊ ကိုဗာဆဈ ( Rating – 8 )
ခယျြလျဆီး အတှကျ ပထမဆုံး ဂိုးဖနျတီးမှု ပွုလုပျ နိုငျခဲ့တဲ့ ဂြျောဂငျြဟို ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျ ကတော့ တပှဲ ထကျ တပှဲ ခယျြလျဆီး ပရိသတျ တှကေို ပိုပိုပွီး အားရ စမှော အသအေခြာ ပါပဲ ။ မနကေ့ ပှဲမှာလညျး ဂြျောဂငျြဟို ဟာ မှားယှငျးတဲ့ ပေးပို့မှု တခြို့ ပွုလုပျ ခဲ့ရငျတောငျ သူဟာ ခယျြလျဆီး ကှငျးလယျ ရဲ့ လိုအပျသမြှ ပေးပို့မှု တှကေို ပွုလုပျ ပေးနိုငျတဲ့ မရှိမဖွဈ ကစားသမား တယောကျ အဖွဈ ရပျတညျ နဆေဲ ဆိုတာ ဆကျလကျ ပွသ နိုငျခဲ့ပါတယျ ။
သှငျးဂိုး တဂိုး မှ မရသေးဘူး ဆိုပမေယျ့ ကိုဗာဆဈ ဟာ ခယျြလျဆီး ကှငျးလယျ တိုကျစဈ နဲ့ ခံစဈ ကို ဟနျခကျြ ညီအောငျ ထိနျးပေး နိုငျတဲ့ Box-to-Box ကစားသမား ကောငျး တယောကျ အနနေဲ့ အသငျး ရဲ့ ကှငျးလယျ ကို ဦးဆောငျမှု ပွုပေး နပေါတယျ ။ လမျးပတျ ရဲ့ လကျအောကျ မှာ ခွစှေမျး အမြားကွီး တိုးတကျ လာတဲ့ နောကျထပျ ကှငျးလယျလူ တဦး လို့ သတျမှတျမယျ ဆိုရငျလညျး မမှားနိုငျပါဘူး ။
တိုကျစဈ – ဝီလီယံ ( Rating –6) ၊ မဆေငျမောငျ့ ( Rating –7) ၊ အဘေရာဟမျ ( Rating –9)
ဒီရာသီ ပထမဆုံး ခယျြလျဆီး အသငျး အတှကျ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲထှကျခှငျ့ ရရှိ ခဲ့တဲ့ ဝီလီယံ ဟာ မနညေ့ က ပှဲရဲ့ တခြို့ ပှဲခြိနျ တှမှော မလိုအပျတဲ့ ဘောလုံး ကိုငျမှု တှကေို ဆကျလကျ ပွုလုပျ နဆေဲ ဖွဈပွီး တခကျြ တခကျြ ခံစဈ ကို ဘောလုံး ပွနျပွနျ ဆှဲသှားတာ က ခယျြလျဆီး အသငျး ရဲ့ တိုကျစဈ ကို နှောငျ့နှေး စခေဲ့တာ ကို တှခေဲ့ရပါတယျ ။ သို့ပမေယျ့ လညျး လငျြမွနျတဲ့ တိုကျစဈ စှမျးဆောငျရညျ နဲ့ ဖွတျတငျဘော တခြို့ ကို ဝီလီယံ ဆီကနေ ရရှိ ခဲ့ပါတယျ ။
မနညေ့ က ပှဲမှာ သှငျးဂိုး ၂ဂိုး လောကျ ရခဲ့သငျ့တဲ့ မောငျ့ ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျ ကတော့ ခယျြလျဆီး ပရိသတျ တှကေို ဖြျောဖွမှေု ပေးနဆေဲ ဖွဈပါတယျ ။ လမျးပတျ လကျသဈ လို့ သတျမှတျ လို့ မရသေးဘူး ဆိုရငျတောငျ မောငျ့ ဟာ ဒီရာသီ ခယျြလျဆီး အသငျး ရဲ့ အကောငျးဆုံး ကစားသမား တဦး လို့ သတျမှတျ လို့ ရနတေဲ့ အနအေထား မှာ ရှိနပေါပွီ ။ အလိမျအခေါကျ စှမျးရညျကောငျး ၊ တဦးခငျြး ကြျောဖွတျမှု တခြို့ ၊ အမိုကျစား ဖွတျတငျဘော တှကေို မဆေငျမောငျ့ စှမျးဆောငျ ထားခဲ့ပါတယျ ။
ခယျြလျဆီး အတှကျ ပထမဆုံး ဟကျထရဈ ဂိုး ရခဲ့တဲ့ အဘေရာဟမျ ကတော့ မနညေ့ က ပှဲစဉျ ရဲ့ Man of the Match ပါပဲ ။ တိုကျစဈပိုငျး နရောယူမှု ၊ အတိုးအလှုပျ ၊ တှနျးတှနျးတိုကျတိုကျ ကစားနိုငျမှု ၊ အဆုံးသတျပိုငျး တှကေ ဘာမှ ပွောစရာ မရှိအောငျ အထူး ကောငျးနခေဲ့ပါတယျ ။ ဒါဟာ လမျးပတျ ရဲ့ ယုံကွညျမှု တှကေို အဘေရာဟမျ ဟာ သူ တတျစှမျးသလောကျ သှငျးဂိုး တှနေဲ့ ပွနျပွီး ပေးဆပျ နတော ဖွဈပါတယျ ။
လူစားဝငျ ကစားသမား တှရေဲ့ Rating မြား – ဇူးမား ( Rating –6) ၊ ဘာကလေ ( Rating –5) ၊ ဘတျရှူဝါရီ ( Rating –5)